Umenzi weAdapter efanelekileyo yeShank kunye neFektri | Gimarpol
Iadapter zeShank zilungele zonke iintlobo zoomatshini bokubhola, zombini iPneumatic kunye neHydraulic. Umsebenzi we-shank adapter kukuhambisa i-torque yokujikeleza, amandla okutya, amandla eempembelelo kunye nokugungxula okuphakathi ukuya kumtya wokugrumba.
Yintoni iadaptha yeshank?
I-Shank bar, ibha yesitrayikhi, iadaptha yeshank
Inzululwazi kunye nokuyilwa kwemisonto esemgangathweni sisiseko sezixhobo zokugrumba, unxibelelwano oluphezulu lomsonto, ulawulo olungqongqo lwenkqubo yentsimbi kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukusebenza ngokugqwesileyo konxibelelwano lwentambo. Unxibelelwano oluchanekileyo lwentambo kunye nomsantsa omkhulu okanye omncinci luya kukhokelela kukungcangcazela okuphezulu kunye nokushukuma ngexesha lokomba, kubangele umsonto ubushushu obuphezulu kwaye wophukile.
Isicelo se-OEM siyafumaneka.
1. Khetha isuntswana lokumba okanye isuntswana elifanelekileyo ngokombandela wokugrumba.
2. Lungisa isantya sokujikeleza esifanelekileyo ngokombandela oza kubethwa. Ukuba isantya sokujikeleza sikhawuleza kakhulu, indawo eshushu eshushu yokunyibilika iya kuthoba, kwaye izinto ezithambileyo ezinesantya sokujikeleza kancinci ziya kunamathela.
3. Chonga inani lokutya komatshini wokugrumba ngokobunzulu kunye nobubanzi bomngxuma owombileyo.
4. Umatshini wokugrumba kukutya okujikelezayo okukhawulezayo, kwaye ukhuselo lokhuseleko kufuneka luqwalaselwe.
5. Nika ingqalelo ekuqinisekiseni ubukhali bento yokomba. Kuyimfuneko ukuba ulole okanye utshintshe i-drill bit rhoqo.
6. Yithambise rhoqo i-drill shaft.
(1) Impembelelo yokomba izixhobo: intambo yocingo yokomba izixhobo, ukubhola impompo zokomba izixhobo.
(2) Izixhobo zokubhola ezijikelezayo: uhlobo lwe-shaft ethe nkqo-uhlobo lokuphatha lokutya, uhlobo lokwahluka lokondla, uhlobo lokutya lwe-hydraulic Intambo yentsimbi yentsimbi edityanisiweyo kunye nohlobo lokucinezelwa, isilinda hydraulic kunye nohlobo loxinzelelo lokubhola; Iselfowni egcwele amandla ombane wamandla ombane, uhlobo lwamandla oomatshini bokubhola.
(3) isixhobo sokugrumba.
(4) Isixhobo sokugumba esihlanganisiweyo: Isixhobo sokugrumba kunye nemisebenzi enjengokungcangcazela, ifuthe, ukujikeleza, uxinzelelo lwe-static njalo njalo kwindibaniselwano ezahlukeneyo.
Ngokwesiqhelo imveliso ifuna iintsuku ezingama-20 ukuvelisa, ngaphakathi kweentsuku ezi-3 ukuba ikwisitokhwe.
I-Q2: Zeziphi iindlela zokuhlawula ezamkelweyo?
Siyavuma T / T, L / C, West Union, One touch, Money Gram, Paypal.
Q3: Kuthekani ngokuthunyelwa?
Isiseko sobunye ubungakanani .Singayithumela kuwe nge-Express, ngoMoya, ngolwandle, nangololiwe okanye ngeempahla okanye iarhente yakho yaseTshayina.
I-Q4: Ulawula njani umgangatho?
Kuya kufuneka sijonge kwaye sivavanye wonke umntu iqhosha ngaphambi kokuba zithunyelwe.
Q5: Ngaba uyavuma ukuba isampulu?
Ewe, zamkelekile oda yakho isampuli ukuvavanya umgangatho wethu.
I-Q6: Ngaba sinokukhetha umbala omncinci weqhosha?
Ewe sinegolide, isilivere, emnyama neblue kukhetho lwakho.
Egqithileyo Iintonga zeTaper
I-Rock drill eyayibanjwe ngesandla